I-China i-Peel elula ye-Aluminium ye-foil ye-Induction ye-Seal Liner mveliso kunye nabathengisi | 品牌 名 / 公司 名
Intsingiselo kunye nomsebenzi wokutywina ukugoba ukutywina, oku kwaziwa njenge-lining lining, kubhekisa kwisiciko kunye nezinto zokulungelelanisa ezinokuthi zivelise umphumo wokutywina oqinileyo ngesikhongozeli. Apha, izikhongozeli zibhekisa kwiibhotile zeglasi, iibhotile zeplastiki kunye neenkonkxa zentsimbi. Kukho iintlobo ngeentlobo zokugquma, kubandakanya iminqwazi yokujija, ukugoba, ii-cap, ii-cap, ii-caps. Izinto zokugcoba zibhekisa kwizinto ezinokuvala isiciko kunye nesikhongozeli ngokuqinileyo, izixhobo ezinemfuno ezithile kunye nokubalulwa akunako kwaphela ukuvuza. Ukuqinisekisa ukusebenza kweempahla ezihlanganisiweyo kuhlala kungatshintshi, umzekelo, ukuba isiciko sisetyenziswa kuphela kwaye akukho lining ezantsi kwekhava, isiphumo sokutywina kunzima ukufezekisa. Umsebenzi wokufaka mkhulu kakhulu
Impahla eluhlaza: Ifoyile yeAluminiyam, ifilimu, izinto zokubambelela, i-inki, isinyibilikisi, njl.
Utywina loPhawu: PS, PP, PET, okanye PE
Ubukhulu obuqhelekileyo: 0.24-0.38mm
Ububanzi obuqhelekileyo: 9mm - 182mm
Ngokukodwa ukucoceka okucocekileyo.
Alids ezineziciko ngefoyile ye package ezahlukeneyo, PET / iHDPE / PP / iibhotile PS / PVC kunye neebhotile zeglasi.
Amatywina oKwazisa ubushushu anamandla okuzinzisa ukutywina uninzi lweekhonteyina.
1. Iimpawu ezintsha
2. Thintela ukuvuza okubiza imali eninzi
3. Ukunciphisa umngcipheko wokuphazanyiswa, iipilferage kunye nongcoliseko
Yandisa ixesha lokugcina ubomi
5. Yenza amatywina e-hermetic
6. Ubume bendalo
Egqithileyo Phakamisa 'N' Peel
Okulandelayo: Inxalenye enye yobushushu boKhuseleko lokuTywina iTywina ngeNkxaso